Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.2 ebalayo Human
Iiprojekthi zeenkcazo zoluntu zithatha ingxaki enkulu, ziphule zibe ziqhekeza ezilula, zithumele kubasebenzi abaninzi, kwaye zihlanganiswe iziphumo.
Iiprojekthi zeenkcazo zoluntu zidibanisa iinzame zabantu abaninzi abasebenza kwii-microtasks ezilula ukwenzela ukucombulula iingxaki ezingenakwenzeka kumntu omnye. Unokuba neengxaki zophando ezifanelekileyo ukubala komntu ukuba ucinga ukuba: "Ndinokuyicombulula le ngxaki ukuba ngaba ndibancedisi abaphando abankulungwane."
Umzekelo wokubonakaliswa kwiprojekthi yokuqulunqwa komntu yiGalaxy Zoo. Kule projekthi, amavolontiya angaphezu kwekhulu lamawaka ahlalutya imifanekiso malunga nemigulane yesigidi esineenkcukacha ezichanekileyo ngaphambili-kunye nemigudu emancinci yenzululwazi yezobugcisa. Olu hlobo olwandisiweyo olunikezelwa ngobambiswano obuninzi lukhokelela kwizinto ezintsha zokufumana malunga nendlela iigalaxi zakha ngayo, kwaye yajika yiklasi elitsha elitsha elibizwa ngokuba yi "Green Peas".
Nangona i-Galaxy Zoo ibonakala ingekho kwiphando loluntu, kukho imimandla eninzi apho abaphandi benzululwazi bafuna ukukhokha, ukukhetha, okanye ukubhala iifoto okanye iitekisi. Kwezinye iimeko, olu hlalutyo lunokwenziwa yiikhomputha, kodwa kukho iindlela ezithile zokuhlalutya okunzima kwiikhomputha kodwa kulula kubantu. Zizo ezi lula-kuba-abantu kodwa zikhuni-computer-microtask esingazijika kwiiprojekthi zeenkomfa zabantu.
Akukona nje kuphela i-microtask kwiGalaxy Zoo ngokubanzi, kodwa isakhiwo seprojekthi siqhelekileyo ngokunjalo. Galaxy Zoo, kunye nezinye iiprojekthi zeenkomfa zabantu, ngokuqhelekileyo zisebenzisa icebo lokudibanisa-sicelo (Wickham 2011) , kwaye emva kokuba uqonde le qhinga uza kulusebenzisa ukuxazulula iingxaki ezininzi. Okokuqala, ingxaki enkulu iyahlukana kwiinkalo ezincinane zeengxaki. Emva koko, umsebenzi wabantu usetyenziswa kwingxaki nganye encinci ye-chunk, ngokuzimela kwezinye iindawo. Ekugqibeleni, iziphumo zalo msebenzi zihlanganiselwe ukuvelisa isisombululo sokuvumelana. Ngenxa yokuba imvelaphi, makhe sibone indlela icebo lokudibanisa-esebenzayo-esetyenziswa ngayo kwi-Galaxy Zoo.